နိုင်ငံခြားသူတွေရဲ့.. မိုက်ရိုင်းမှုကို …ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ (ဗွီဒီယိုဖိုင်) – ရှအေလငျး
နိုင်ငံခြားသူတွေရဲ့.. မိုက်ရိုင်းမှုကို …ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ (ဗွီဒီယိုဖိုင်)
ထိုင်း နိုင် ငံ က ခရီးသွားအမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးရဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အပြုအမူကြောင့် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ကိုယ်ကိုလာစော်ကားသလို ခံစားခဲ့ရကြောင်း လူမှုကွန်ယက်တွင် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနှင့်တစ်ကွ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သူမ ၏ ခြေထောက်နှင့် သူ့မျက်နှာမှာ တစ်တန်းထဲဖြစ်နေပြီး ခြေအိတ်အနံ့ဆိုးများကြောင့် မခံနိုင်ဖြစ်ကာ ခြေထောက်အောက်ချပေးရန် ကောင်းမွန်စွာ ပြောသည်ကို ဂရုမစိုက်ပဲ ခဏသာ ဖယ်လိုက်ပြီး ပြန်တင်ထားသည်။ သူက အခါခါ ထပ်မံပြောပေမယ့် လုံးဝဂရုမစိုက်သလို နေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အဆိုပါ နိုင်ငံခြားသူအမျိုးသမီး မည်သို့ တုံ့ပြန်သည်ကို သိစေရန် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
ဘယ် လို လူပါးဝခဲ့သလဲဆိုတာ ဗီဒီယိုတွင် တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
ရုပ် သံ ဖိုင်အား ကြည့်ရန် နှိပ်ပါ
ထိုငျးနိုငျငံက ခရီးသှားအမြိုးသားတဈဦးဟာ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှား အမြိုးသမီးငယျတဈဦးရဲ့ ရိုငျးစိုငျးတဲ့ အပွုအမူကွောငျ့ ကိုယျ့နိုငျငံမှာ ကိုယျကိုလာစျောကားသလို ခံစားခဲ့ရကွောငျး လူမှုကှနျယကျတှငျ ဗီဒီယိုမှတျတမျးနှငျ့တဈကှ ရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
သူမ၏ ခွထေောကျနှငျ့ သူ့မကျြနှာမှာ တဈတနျးထဲဖွဈနပွေီး ခွအေိတျအနံ့ဆိုးမြားကွောငျ့ မခံနိုငျဖွဈကာ ခွထေောကျအောကျခပြေးရနျ ကောငျးမှနျစှာ ပွောသညျကို ဂရုမစိုကျပဲ ခဏသာ ဖယျလိုကျပွီး ပွနျတငျထားသညျ။ သူက အခါခါ ထပျမံပွောပမေယျ့ လုံးဝဂရုမစိုကျသလို နခေဲ့သညျ။ နောကျဆုံးတှငျ အဆိုပါ နိုငျငံခွားသူအမြိုးသမီး မညျသို့ တုံ့ပွနျသညျကို သိစရေနျ ဗီဒီယိုမှတျတမျးတငျခဲ့သညျ။
ဘယျလို လူပါးဝခဲ့သလဲဆိုတာ ဗီဒီယိုတှငျ တှမွေ့ငျရပါလိမျ့မညျ။
ရုပျ သံ ဖိုငျအား ကွညျ့ရနျ နှိပျပါ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်း ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေ ကမ္ဘာလွမ်းတော့ပါမည်
“Victoria လေးအတွက်သာမက သူလေးအတွက်ပါ ဝန်းရံ ပေးကြပါ..ကလေးက ၁နှစ်နဲ့ ၈ လပဲရှိသေးတယ်”
အချိန်ကာလ အတိုလေးအတွင်းမှာ မယုံနိုင်လောက်အောင် ဝိတ်ပြန်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ် !!!!!
“1.6.2019 မှ… 30.6.2019 အထိ… (7)ရက်သားသမီး… တစ်လစာဟောကိန်း”
“သမီးချောလေးရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ အိတုန်”
မြမြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ မင်းသားနေရာက သရုပ်ဆောင်မယ့်သူ ထွက်ပေါ်
Kpop Idol ဆိုတာ လွယ်လွယ်နဲ့ ဖြစ်လာခဲ့တာလား?
“မိုးကောင်းမြို့နယ်၌ ၁၅ နှစ်အရွယ်သမီးအရင်းအား ဖခင်ဖြစ်သူမှ အလိုမတူပဲ...